Management Self-Employment Upgrade Yourself
အပြိုင်အဆိုင်များသည့်ယနေ့ခေတ်ကြီးတွင်သင့်သည်အစီအစဉ်တစ်ခုဧ။ိအစိတ်အပိုင်း အတွက်လျောက်လွှာတင်ရန်ကြုံတွေ့ကောင်းကြုံတွေ့လာပါလိမ့်မည်။သို့မဟုတ်ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရန် အတွက် သို့မဟုတ် ပညာတော်သင်ဆုရရန်အတွက် သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဆုကြေးငွေ ရရှိရန် အတွက် လျှောက်ထားရလိမ့်မည်။ ဘယ်အခြေအနေ၌မဆို အခြေခံကြသော အချက် အချို့ကို ပေးထားပါသည်။ ဤအချက်များမှာသင့်အား အသင့်တော်ဆုံးကိုယ်စားပြုသည့် လျောက်လွှာ တစ်ခုကို ရေးသားရန်တွင် အဓိကကျသော အချက်များဖြစ်သည်။
သင်သည် စာစီစာကုံးတစ်ခုကို သို့မဟုတ် ပြရုပ်တစ်ခုကို စတင်ရေးသားခြင်းမပြုမည်။ သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဝင်ခွင့်ရသင့်သနည်း သို့မဟုတ် ပညာတော်သင်ဆုကိုပေးသင့်သနည်းဆို သည့်အချက်များကို ကြည့်ပါ။ ဤဖော်ပြချက်များသည် အစီအစဉ်နှင့် မည်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များက အံဝင်ကွင်ကျဖြစ်ပါသနည်း။ အောင်မြင်သော လျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်သော အရည်အချင်း သို့မဟုတ် ကျွှမ်းကျင်မှုများသည် သတ်သတ်မတ်မတ်ရှိသော စာရင်းများရှိသလား။ ရှိခဲ့လျှင်ဤအရိပ်အမြွတ်များကိုသင့်၏အကျိုးဖြစ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပြီးနောက် စာဖတ်သူအား သင်သည် အံဝင်ကွင်ကျဖြစ်သော ၊ ပြရုပ်ဖြစ်သောသူတစ်ဦးဖြစ်သည်ဆိုသည့်အကြောင်းကို တင်ပြ သည့် စာစီစာကုံးတစ်လျောက်လုံးတွင် ဤကျွှမ်းကျင်မှုများကို ဖော်ပြပါ။
၂။ သင့်၏ခွန်အားကို ပြရုပ်အဖြစ်ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြပါ။
သင်သည်စာကို စ၍ရေးရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဟုထင်ပါကသင်သည် မည်သူဖြစ်သနည်း ဆိုသောအချက်ကို တစ်သမတ်တည်း ရှိသည့်အချက်အားလုံးကို စဉ်စားပါ။ မေးခွန်းများကို နားလည်အောင်ဖတ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွှနု်ပ်တို့က သင်၏သူငယ်ချင်းများကို သင်အကြောင်းဖော်ပြရန် မေးခြင်းဖြစ်ပါကသူတို့ဘာပြောကြမည်နည်း။မည်သည့်အစီိအစဉ်အတွက်ကိုမဆို လျှောက်လွာတင် သောအခါ သို့မဟုတ် ပညာသင်ဆုအတွက်လျှောက်လွှာတင်သောအခါ ဖတ်ရူသူများသည် အမြဲပင်ကောင်းဆုံးနှင့် အထူးချွန်ဆုံးသူများကို အမြဲပင် ကြည့်ကြသည်( ထို့အပြင် အသင့်တော်ဆုံးကို ကြည့်သည့်အပြင်) သင်၏အားသာချက်များကို သင့်၏အကျိုးအတွက် အသုံးပြုပါ။ ထုို့အပြင် ဤအချက်များကို ပေါ်လွှင်ရန်အတွက် ဥပမာအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖော်ပြပါ။ ဥပမာအားဖြင့် သင်သည် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များအား ရှာဖွေသည့် အစီအစဉ်တစ်ခုအတွက် လျှောက်လွာတင်ခြင်း ပြုမည်ဆိုပါက သင်သည် ထူးခြားသော အသစ်အဆန်းတစ်ခုခုကို ကျောင်း၌တီထွင်ခဲ့သည်ကို စဉ်းစားသည်သာမက များမကြာမီက သင်ကိုယ်တုိုင် အသစ်အဆန်းကို ရှာဖွေရာမှ ရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာ၏အဖြေကို ရရှိခဲ့သည့်အကြောင်းပြောပြပါ။
အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာကို ရေးသားနိုင်ရန်အတွက် သင်ရေးသေားစာစီစာကုံးကို ခေတ္တအချန်ယူ၍ မည်ကဲ့သို့ အဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်ဆိုမည်ကို စဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ ( သို့မဟုတ် မှားယွင်းစွာအဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုရန်) အကယ်၍ လျှောက်လွှာသည် လွန်ခဲ့သည့်ကာလ၌ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည့်အကြောင်းကို မေးမြန်းခြင်းပြုသည်ဆိုပါက ဤအကြောင်းအရာကို သင်မည်ကဲ့သို့တုံပြန်ခဲ့သည်ကိုလည်ကောင်း၊ တွေ့ရှိခဲ့သည့်အခြေအနေကို မည်သို့သတိမှုခဲ့သည် ကိုလည်ကောင်း၊ သို့မဟုတ် သင်၏တုံ့ပြန်မှုကို အဘယ်သို့ပြန်၍ အဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်ကို လည်ကောင်း စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မေးမြန်းသူက စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုက်ို မည်ကဲ့သို့ ကျော်လွှားခဲ့သည့်အကြောင်းကို အတန်းပြီးချိန်တွင်သင်ကို အနိုင်ကျင့်သော လူအား အဘယ်ကဲ့သို့ ကိုယ်တ်ိုင်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်ကို ဥပမာဖြင့် အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ရှားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ဤဥပမာသည် သင့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကို မည်ကဲ့သို့ကျော်လွှားခဲ့သည်ကို ပြသော်လည်း မေးမြန်းသူ၏ ရူထောင့်မှကြည့်လျှင် ဤတင်ပြချက်မှာ ပြရုပ်တစ်ခုဟု ယူဆပြီး သင့်၏ဆုံးဖြတ်ချက်အားနည်းမှုနှင့် သင့်အနေနှင့်အကြမ်းဖက်မှုအသုံးပြုခြင်းကို အားပေးသည်ဟု ယူဆနို်င်၏။ ထို့ကြောင့် သင်ရေးသား ထားသောစာစီစာကုံးများမှတဆင့် သို့မဟုတ် ဥပမာများမှတဆင့် လွှဲမှားစွာအဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်ဆို၍ မကောင်းအမြင်ဖြင့်မြင်နိုင်သည်ကို ကြို၍ စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
သင်သည်လျှောက်လွှာတင်ခြင်းမပြုမည်သင့်၏စာစီစာကုံးတစ်ခုလုံးကိုပြန်၍သေချာစွာဖတ်ပြု ပြီး အမှားများကို ပြင်ဆင်ပါ။ မူရင်းမေးခွန်းကို ပြန်၍ကြည့်ခြင်းမှာ အလွန် အရေးကြီး၏။ ထို့အပြင် သင့်၏တုံ့ပြန်မှုသည် လုံလုံလောက်လောက် ရှိသည်ကို သေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ အကြံပေးချက် တစ်ခု အနေဖြင့်ပြောလိုသည်မှာ သင်ရေးသားထားသည့် စာစီစာကုံးအား သင်၏သူငယ်ချင်း သို့မဟုတ် သင့်မိသားစုဝင်တစ်ဦးအား ဖတ်ရူခုိုင်းကာ တင်ပြထားသော အဖြေများအပေါ် မူတည်၍ မူလမေးခွန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို ၄င်းတို့အားပြောခုိုင်းရမည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူတို့သည် သင်ကြိုးစား၍ ဖြေဆိုနေသော မေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်သော မေးခွန်းများကို မေးမြန်းလာပါက သင့်၏စာစီစာကုံးသည် ပေးထားသော ခေါင်းစဉ်နှင့် ကိုက်ညီသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် သင်ရေးသားထားသည့် စာစီစာကုံးကို ပြန်လည်၍ကြည့်ရူခြင်းအားဖြင့် သဒ္ဒါအားဖြင့် သော်လည်ကောင်း၊ စာလုံးပေါင်းအားဖြင့် သော်လည်ကောင်း မှားယွင်းခြင်းမရှိအောင် ပြန်လည် စိစစ်ပါ။ နောက်အကြံပြုချက်တစ်ခုမှာ ရေးထားသော စာစီစာကုံးကို ပုံနှိပ်ထုတ်ယူ၍ စာရွက်ပေါ်တွင် အမှားများကို ရှာဖွေခြင်းသည် ကွန်ပျူတာ၏ မျက်နှာပြင် ပေါ်တွင်ရှာဖွေခြင်းထက်ပိုလွယ်ကူ၏။
၅။ ရေးသားသမျှ အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါစေ။
နောက်ဆုံးပေးသည့် အကြံဥာဏ်မှာ အလုပ်ထက်အပြောကပို၍လွယ်ကူသည်။ ရိုးရှင်း သောစကားဖြင့် ပြောရမည်ဆိုပါက သင်ရေးသားထားသော စာစီစာကုံးသည် ပညာသင်ဆု သို့မဟုတ် အစီအစဉ်လျောက်ထားခြင်းပြုရာတွင် သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ရန်လုံးဝ လိုအပ်သည်။ ဖတ်ရူစိစစ်သူများ သည် သင်၏အမှန်တကယ်အနေအထားကို သိလိုသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သင်သည် လျှောက်ထားချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏အားသာချက်ကို ပေါ်လွှင်အောင်ဖော်ပြပါ။ ထို့အပြင် ဖတ်ရူစိစစ်သူအား သင်သည် အမှန်တကယ် မည်သို့သောသူ ဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြရေးသားပါ။
အပွိုငျအဆိုငျမြားသညျ့ယနခေ့တျေကွီးတှငျသငျ့သညျအစီအစဉျတဈခုဧ။ိအစိတျအပိုငျး အတှကျလြောကျလှာတငျရနျကွုံတှကေ့ောငျးကွုံတှလေ့ာပါလိမျ့မညျ။သို့မဟုတျကြောငျးဝငျခှငျ့ရရနျ အတှကျ သို့မဟုတျ ပညာတျောသငျဆုရရနျအတှကျ သို့မဟုတျ ငှကွေေးဆိုငျရာ ဆုကွေးငှေ ရရှိရနျ အတှကျ လြှောကျထားရလိမျ့မညျ။ ဘယျအခွအေနေ၌မဆို အခွခေံကွသော အခကျြ အခြို့ကို ပေးထားပါသညျ။ ဤအခကျြမြားမှာသငျ့အား အသငျ့တျောဆုံးကိုယျစားပွုသညျ့ လြောကျလှာ တဈခုကို ရေးသားရနျတှငျ အဓိကကသြော အခကျြမြားဖွဈသညျ။
သငျသညျ စာစီစာကုံးတဈခုကို သို့မဟုတျ ပွရုပျတဈခုကို စတငျရေးသားခွငျးမပွုမညျ။ သငျသညျအဘယျကွောငျ့ဝငျခှငျ့ရသငျ့သနညျး သို့မဟုတျ ပညာတျောသငျဆုကိုပေးသငျ့သနညျးဆို သညျ့အခကျြမြားကို ကွညျ့ပါ။ ဤဖျောပွခကျြမြားသညျ အစီအစဉျနှငျ့ မညျကဲ့သို့သောပုဂ်ဂိုလျမြားက အံဝငျကှငျကဖြွဈပါသနညျး။ အောငျမွငျသော လြှောကျလှာတဈခုဖွဈဖို့ရနျအတှကျလိုအပျသော အရညျအခငျြး သို့မဟုတျ ကြှမျးကငျြမှုမြားသညျ သတျသတျမတျမတျရှိသော စာရငျးမြားရှိသလား။ ရှိခဲ့လြှငျဤအရိပျအမွှတျမြားကိုသငျ့၏အကြိုးဖွဈရနျအတှကျ အသုံးပွုပွီးနောကျ စာဖတျသူအား သငျသညျ အံဝငျကှငျကဖြွဈသော ၊ ပွရုပျဖွဈသောသူတဈဦးဖွဈသညျဆိုသညျ့အကွောငျးကို တငျပွ သညျ့ စာစီစာကုံးတဈလြောကျလုံးတှငျ ဤကြှမျးကငျြမှုမြားကို ဖျောပွပါ။
၂။ သငျ့၏ခှနျအားကို ပွရုပျအဖွဈပျေါလှငျအောငျဖျောပွပါ။
သငျသညျစာကို စ၍ရေးရနျ အဆငျသငျ့ဖွဈပွီဟုထငျပါကသငျသညျ မညျသူဖွဈသနညျး ဆိုသောအခကျြကို တဈသမတျတညျး ရှိသညျ့အခကျြအားလုံးကို စဉျစားပါ။ မေးခှနျးမြားကို နားလညျအောငျဖတျပါ။ အကယျ၍ ကြှနျုပျတို့က သငျ၏သူငယျခငျြးမြားကို သငျအကွောငျးဖျောပွရနျ မေးခွငျးဖွဈပါကသူတို့ဘာပွောကွမညျနညျး။မညျသညျ့အစီအစဉျအတှကျကိုမဆို လြှောကျလှာတငျ သောအခါ သို့မဟုတျ ပညာသငျဆုအတှကျလြှောကျလှာတငျသောအခါ ဖတျရူသူမြားသညျ အမွဲပငျကောငျးဆုံးနှငျ့ အထူးခြှနျဆုံးသူမြားကို အမွဲပငျ ကွညျ့ကွသညျ( ထို့အပွငျ အသငျ့တျောဆုံးကို ကွညျ့သညျ့အပွငျ) သငျ၏အားသာခကျြမြားကို သငျ့၏အကြိုးအတှကျ အသုံးပွုပါ။ ထို့အပွငျ ဤအခကျြမြားကို ပျေါလှငျရနျအတှကျ ဥပမာအမြိုးမြိုးဖွငျ့ ဖျောပွပါ။ ဥပမာအားဖွငျ့ သငျသညျ တီထှငျဖနျတီးနိုငျသညျ့ပုဂ်ဂိုလျမြားအား ရှာဖှသေညျ့ အစီအစဉျတဈခုအတှကျ လြှောကျလှာတငျခွငျး ပွုမညျဆိုပါက သငျသညျ ထူးခွားသော အသဈအဆနျးတဈခုခုကို ကြောငျး၌တီထှငျခဲ့သညျကို စဉျးစားသညျသာမက မြားမကွာမီက သငျကိုယျတိုငျ အသဈအဆနျးကို ရှာဖှရောမှ ရငျဆိုငျနရေသော ပွဿနာ၏အဖွကေို ရရှိခဲ့သညျ့အကွောငျးပွောပွပါ။
အကောငျးဆုံးလြှောကျလှာကို ရေးသားနိုငျရနျအတှကျ သငျရေးသေားစာစီစာကုံးကို ခတ်ေတအခနျြယူ၍ မညျကဲ့သို့ အဓိပ်ဗါယျဖှငျ့ဆိုမညျကို စဉျးစားရနျအရေးကွီးသညျ။ ( သို့မဟုတျ မှားယှငျးစှာအဓိပ်ဗါယျဖှငျ့ဆိုခွငျးမပွုရနျ) အကယျ၍ လြှောကျလှာသညျ လှနျခဲ့သညျ့ကာလ၌ တဈခုခုဖွဈခဲ့သညျ့အကွောငျးကို မေးမွနျးခွငျးပွုသညျဆိုပါက ဤအကွောငျးအရာကို သငျမညျကဲ့သို့တုံပွနျခဲ့သညျကိုလညျကောငျး၊ တှရှေိ့ခဲ့သညျ့အခွအေနကေို မညျသို့သတိမှုခဲ့သညျ ကိုလညျကောငျး၊ သို့မဟုတျ သငျ၏တုံ့ပွနျမှုကို အဘယျသို့ပွနျ၍ အဓိပ်ဗါယျဖှငျ့ဆိုခဲ့သညျကို လညျကောငျး စဉျးစားရမညျဖွဈသညျ။ အကယျ၍ မေးမွနျးသူက စိနျချေါမှုတဈခုကို မညျကဲ့သို့ ကြျောလှားခဲ့သညျ့အကွောငျးကို အတနျးပွီးခြိနျတှငျသငျကို အနိုငျကငျြ့သော လူအား အဘယျကဲ့သို့ ကိုယျတိုငျတုံ့ပွနျခဲ့သညျကို ဥပမာဖွငျ့ အသုံးပွုခွငျးကို ရှောငျရှားခွငျးသညျ အကောငျးဆုံးဖွဈနိုငျသညျ။ ဤဥပမာသညျ သငျ့စိနျချေါမှုတဈခုကို မညျကဲ့သို့ကြျောလှားခဲ့သညျကို ပွသျောလညျး မေးမွနျးသူ၏ ရူထောငျ့မှကွညျ့လြှငျ ဤတငျပွခကျြမှာ ပွရုပျတဈခုဟု ယူဆပွီး သငျ့၏ဆုံးဖွတျခကျြအားနညျးမှုနှငျ့ သငျ့အနနှေငျ့အကွမျးဖကျမှုအသုံးပွုခွငျးကို အားပေးသညျဟု ယူဆနိုငျ၏။ ထို့ကွောငျ့ သငျရေးသား ထားသောစာစီစာကုံးမြားမှတဆငျ့ သို့မဟုတျ ဥပမာမြားမှတဆငျ့ လှဲမှားစှာအဓိပ်ဗါယျဖှငျ့ဆို၍ မကောငျးအမွငျဖွငျ့မွငျနိုငျသညျကို ကွို၍ စဉျးစားရမညျဖွဈသညျ။
သငျသညျလြှောကျလှာတငျခွငျးမပွုမညျသငျ့၏စာစီစာကုံးတဈခုလုံးကိုပွနျ၍သခြောစှာဖတျပွု ပွီး အမှားမြားကို ပွငျဆငျပါ။ မူရငျးမေးခှနျးကို ပွနျ၍ကွညျ့ခွငျးမှာ အလှနျ အရေးကွီး၏။ ထို့အပွငျ သငျ့၏တုံ့ပွနျမှုသညျ လုံလုံလောကျလောကျ ရှိသညျကို သခြောအောငျပွုလုပျပါ။ အကွံပေးခကျြ တဈခု အနဖွေငျ့ပွောလိုသညျမှာ သငျရေးသားထားသညျ့ စာစီစာကုံးအား သငျ၏သူငယျခငျြး သို့မဟုတျ သငျ့မိသားစုဝငျတဈဦးအား ဖတျရူခိုငျးကာ တငျပွထားသော အဖွမြေားအပျေါ မူတညျ၍ မူလမေးခှနျးနှငျ့ ကိုကျညီမှုရှိမရှိကို ၎င်းငျးတို့အားပွောခိုငျးရမညျ ဖွဈသညျ။ အကယျ၍ သူတို့သညျ သငျကွိုးစား၍ ဖွဆေိုနသေော မေးခှနျးနှငျ့ပတျသကျသော မေးခှနျးမြားကို မေးမွနျးလာပါက သငျ့၏စာစီစာကုံးသညျ ပေးထားသော ခေါငျးစဉျနှငျ့ ကိုကျညီသညျ။ နောကျဆုံးအနဖွေငျ့ သငျရေးသားထားသညျ့ စာစီစာကုံးကို ပွနျလညျ၍ကွညျ့ရူခွငျးအားဖွငျ့ သဒ်ဒါအားဖွငျ့ သျောလညျကောငျး၊ စာလုံးပေါငျးအားဖွငျ့ သျောလညျကောငျး မှားယှငျးခွငျးမရှိအောငျ ပွနျလညျ စိစဈပါ။ နောကျအကွံပွုခကျြတဈခုမှာ ရေးထားသော စာစီစာကုံးကို ပုံနှိပျထုတျယူ၍ စာရှကျပျေါတှငျ အမှားမြားကို ရှာဖှခွေငျးသညျ ကှနျပြူတာ၏ မကျြနှာပွငျ ပျေါတှငျရှာဖှခွေငျးထကျပိုလှယျကူ၏။
၅။ ရေးသားသမြှ အစဈအမှနျဖွဈပါစေ။
နောကျဆုံးပေးသညျ့ အကွံဉာဏျမှာ အလုပျထကျအပွောကပို၍လှယျကူသညျ။ ရိုးရှငျး သောစကားဖွငျ့ ပွောရမညျဆိုပါက သငျရေးသားထားသော စာစီစာကုံးသညျ ပညာသငျဆု သို့မဟုတျ အစီအစဉျလြောကျထားခွငျးပွုရာတှငျ သငျ၏ကိုယျပိုငျဖွဈရနျလုံးဝ လိုအပျသညျ။ ဖတျရူစိစဈသူမြား သညျ သငျ၏အမှနျတကယျအနအေထားကို သိလိုသညျ။ အဘယျကွောငျ့ ဆိုသျော သငျသညျ လြှောကျထားခကျြနှငျ့ ကိုကျညီမှုရှိမရှိကို ဆုံးဖွတျနိုငျရနျဖွဈသညျ။ သငျ၏အားသာခကျြကို ပျေါလှငျအောငျဖျောပွပါ။ ထို့အပွငျ ဖတျရူစိစဈသူအား သငျသညျ အမှနျတကယျ မညျသို့သောသူ ဖွဈကွောငျးကို ဖျောပွရေးသားပါ။
In today’s competitive world, you will likely be faced withasituation where you have to apply to beapart ofaprogram, get into school, or receiveascholarship orafinancial award. Regardless of the situation, Wynee providesafew underlying elements that are essential to putting together the application that best represents you asaperson:
1 Match Up Your Skills
Before you start to think about writing the essays or showcasing why you should be awarded entrance/a scholarship, look at the prompt. Does the description outline what type of person would bea“great fit” for the program? Is thereaspecific list of what skills or qualities needed to be successful applicant? If so, use those “hints” to your advantage and show the readers you are aware of the skills necessary to beagood fit and showcase those skills in particular throughout your essays.
2 Showcase Your Strengths
Once you think you are ready to start writing, think about all of the unique qualities that make you who you are. Think about the question: if we were to ask your friends to describe you, what would they say? When applying to any type of program or scholarship, the readers are always looking for the best and the brightest (in addition to looking for the best fit). Utilize your strengths to your advantage and highlight them in different ways with clear examples. For example, if you are applying toaprogram that is looking for creative individuals, think about how you’ve not only createdaunique innovation at school but also how you recently came up with an innovative solution toaproblem you were facing.
3 Put Yourself in the Reader’s Shoes
In order to put together the best application, it’s important to pause and think about how your essay could be interpreted (or misinterpreted). If the application asks you to talk about something that’s happened to you in the past and how you responded to it, be aware of how the situation or your response could be interpreted. If the prompt asks how you overcameachallenge, it might be best to refrain from using the example when you physically confrontedabully after class. While this example shows how you “overcame”achallenge, from the reader’s perspective, it also showcasesalack of judgement and your inclination to use violence. So, try to think through how your essays or examples could be misinterpreted negatively before using them.
Before you turn in the application, make sure to go through the essays and read over your work for errors. It’s important to look back at the original questions and ensure that your response adequately answers the question. One trick that is often used is to haveafriend orafamily member read through the essays and try to formulate the original question based on your answer. If they are able to ask the question you are trying to answer, then your essay is on topic. Finally, go back through the application in its entirety and make sure there are no grammatical or spelling errors. Another trick here is to print out the essay to catch all of the errors, as they are easier to identify on paper than on the computer screen.
5 Be Authentic!
This last piece of advice is much easier said than done: be authentic. In simpler terms, it’s absolutely essential to be yourself when writing essays and applying to programs/scholarships. The readers want to get to know the real you in order to determine if you are the right fit. Tell your story, showcase your strengths, and tell the readers who you really are.